Meelaha ugu jaban ee laga helo Daabacadaha Canvas | 2022- Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn 20 Goobaha Sawirka Sawirka Lacag La'aanta Ugu Fiican Sanadka 2022
20 Goobaha Sawirka Sawirka Lacag La'aanta Ugu Fiican Sanadka 2022
Waxaa laga yaabaa inay kugu adag tahay inaad gasho sawirrada kaydka bilaashka ah ee isticmaalkaaga shaqsiyeed ama ganacsi, ha ka welwelin, maqaalkani wuxuu kuu soo bandhigi doonaa ogeysiiskaaga, goobaha sawirrada kaydka ugu fiican ee ugu fiican.
Haddi aad dhisayso degel ganacsi, abuurto buug-yaraha daabacan, samaynayso xayaysiis dhijitaal ah ama joornaal, ama mashruucyo kale oo hal abuur leh, waxaad ogtahay in sawirka weyni kaa caawinayo in nuxurkaagu ka gudbo "wanaagsan" oo uu noqdo "weyn."
Shaqo soo jiidasho leh, soo jiidasho leh, soo jiidasho leh oo shabkada ah ayaa si gaar ah ugu baahan fiiqan, qabashada sawirada muuqaalka si ay u guulaysato.
Nasiib wanaag, waxaa jiray tiro sii kordhaysa oo degello leh sawir -gacmeedyo qurux badan oo ku soo qulqulaya dhammaan shabakadda. Waxa ugu fiican oo dhan, waa bilaash!
Sawir qaadashadu had iyo jeer waxay ahayd qayb cajiib ah oo naqshadaynta ah. Nasiib darro, waxa aanu la qabsanay in aanu aragno sawiro wanaagsan oo dad iyo shay ah. Ma aha oo kaliya in badan oo ka mid ah sawirada kaydka ah ee soo jiidashada leh, laakiin sidoo kale waxay ku kacayaan lacag badan. Si loo xalliyo tan, waxaanu diyaarinay liiska mareegaha gaarka ah ee sawirada saamiyada bilaashka ah.
Eeg shaxda waxyaabaha ku qoran hoosta.
Waa Maxay Sawirada Hantidu?
Sawirada kaydka ah waa sawiro hore loo qaaday, la tafatiray oo diyaar u ah in la isticmaalo. Laakin sawirada kaydku xor ma yihiin in la isticmaalo? Dabcan, tiro wanaagsan oo iyaga ka mid ah waa bilaash in la isticmaalo halka qaarna lagu dhejiyo lacag.
Sawir qaadaha ama qoraaga sawirka kaydka ah ayaa ka dhigaya mid bilaash ah ama shati siinta, taasoo la macno ah inaad bilaash ku heli karto ama aad bixin karto lacag si aad u hesho xaqa aad ugu isticmaali karto naqshadahaaga si sharci ah.
Sawirada kaydka kaliya maahan sawirro, waxaad ka heli kartaa sawirro iyo faylal vector, oo lagu daray cajalado fiidyow, dhawaaqyo, iyo inbadan.
Dhowr sadar ee soo socda, waxaan ku liis gareyn doonaa boggaga sawirada saamiyada ee bilaashka ah ee ugu fiican dhamaantood si aad u bogatid.
Goobaha Sawirka Sawirka Lacag La'aanta ee Ugu Fiican
Halkan waxaa ah liistada websaydhada sawirrada kaydka ugu fiican ee ugu wanaagsan:
StockSnap.io waxay leedahay xulasho ballaaran oo sawirro kayd ah oo qurux badan oo qurux badan iyo sawirro qaraar sare leh. Goobtu sidoo kale waxay leedahay muuqaal raadis aad u anfacaya taasoo sahlaysa in la dhex maro kumanaan sawir oo la heli karo. Intaa waxaa dheer, goobtu waxay la socotaa aragtiyada iyo soo dejinta si aad u hesho sawirrada ugu caansan ee la heli karo.
StockSnap.io wuxuu daaweeyaa oo keliya sawirrada tayada ugu sarreeya laga soo bilaabo barkadda weyn ee soo gudbinta, ka dibna wuxuu fududeynayaa soo dejinta iyo adeegsiga, gabi ahaanba bilaash.
StockSnap waxay ku darsataa boqolaal sawir maalin kasta iyo dhammaan sawirrada waxaa lagu sii daayaa hoosta hal -abuurka ee dadweynaha - looma baahna sifayn.
ARAG SIDOO KALE: Sida Lacag Loogu Sameeyo Sawir Qaade | 20 Siyaabood oo Fudud
Pexels wuxuu bixiyaa sawirro tayo sare leh oo gebi ahaanba bilaash ah oo shati ku haysta shatiga Creative Commons Zero (CC0). Dhammaan sawirrada si fiican ayaa loo calaamadeeyay, waa la raadin karaa, sidoo kale waa sahlan tahay in lagu ogaado bogagga ay wax ka heleen.
Dhammaan sawirrada waxaa gacanta lagu soo qaaday sawirro ay soo gudbiyeen isticmaaleyaasheena ama waxaa laga soo qaatay mareegaha sawirka bilaashka ah. Waxay hubiyaan in dhammaan sawirrada la daabacay ay yihiin kuwo tayo sare leh oo shati ka haysta shatiga Pexels.
Aadaabta wuxuu bixiyaa ururinta badan oo sawirro qaraar sare ah wuxuuna noqday mid ka mid ah ilaha ugu wanaagsan ee sawirrada saamiyada. Kooxda Unsplash waxay ku shanleeyaan soo gudbinta cusub waxayna ku muujiyaan sawirrada ugu fiican boggooda hore. Dhammaan sawirrada waxaa lagu siidaayay si bilaash ah shatiga Unsplash.
On Unsplash, waxaad ka heli kartaa in ka badan 2 milyan oo sawirro qaraar sare ah oo si xor ah loo isticmaali karo oo ay kuu keeneen bulshada ugu deeqsiga badan ee sawir qaadayaasha.
4. Dib u celi
Dib u eeg waa goob sawir sawir oo lacag la'aan ah halkaas oo aad ka heli doonto sawirro kayd ah oo lacag la'aan ah oo gacanta lagu soo qaatay oo aadan ka heli doonin meel kale. Loo dhisay bilowga, wariyeyaasha & kuwa sameeya ee ku xanuunsanaya sawirrada kaydka adag. Xor ayaad u tahay inaad u adeegsato sawirrada dib -u -soo -celinta shaqsi ahaan ama ganacsi ahaan adiga oo aan ka baqayn in lagu sifeeyo.
Pixabay waxay bixisaa ururinta badan oo sawirro kayd ah oo lacag la'aan ah, vectors, iyo sawirrada farshaxanka. Dhammaan sawirrada waxaa lagu sii daayay Creative Commons CC0.
Websaydhkan sawirka saamiga ee bilaashka ah waa bulsho firfircoon oo hal-abuur leh, oo wadaagaya sawirro, fiidiyowyo, iyo muusig aan xor ahayn. Dhammaan waxyaabaha ku jira waxaa lagu sii daayaa Ruqsadda Pixabay, taas oo ka dhigaysa mid ammaan ah in la isticmaalo iyadoon la weydiisan oggolaansho ama aan la siinin farshaxanka - xitaa ujeeddooyin ganacsi.
Jaahilnimada wuxuu bixiyaa sawirro qaraar sare oo lacag la'aan ah oo aad ugu adeegsan karto mashaariicdaada shaqsiyeed iyo kuwa ganacsi. Sawirro cusub oo la yaab leh ayaa toddobaad walba lagu daraa oo ka xor ah xayiraadaha xuquuqda daabacaadda. Dhammaan sawirrada waxaa qabtay Ryan McGuire oo ka mid ah Naqshadaha Dawannada.
Ururinta ugu caansan adduunka ee sawirrada saamiyada bilaashka ah ee xallinta sare leh, ayaa ballanqaadaysa inay bixin doonto sawirrada ugu wanaagsan, ugu hal-abuurka badan adduunka-sawirro aadan meel kale ka heli doonin dhammaantood oo bilaash ah.
Freestock.org wuxuu bixiyaa sawirro aad u kala duwan oo tayo sare leh oo dhammaantood lagu sii daayay Creative Commons CC0. Sawirada Freestocks.org ma aha sawirradaada kaydka ah ee bilaashka ah ee duugoobay waqti hore laakiin waa isha sawirro cusub, cusub, oo qaabab badan leh si ay ugu habboon yihiin isticmaalka maalin kasta ee qof walba iyo sidoo kale mashaariic ka adag oo cayiman.
8. Sawirada Bilaashka ah
Bilaashka waxay bixisaa in ka badan 300,000 oo sawirro saamiyadeed oo lacag la'aan ah oo ku hoos jira liisankeeda. Ruqsaddu waxay oggolaanaysaa adeegsiyo aad u ballaadhan.
Freeimages waxaa la bilaabay Febraayo 2001 si loogu beddelo saamiyada qaaliga ah sawir. Fikradda ayaa ahayd in la sameeyo goob ay dadka hal-abuurka leh ku beddelan karaan sawiradooda dhiirigelin ama shaqo.
Boggu waxa uu u xuubsiibtey bulshada aadka u badan ee aad maanta aragto - waxaa jira in ka badan 2,500,000 isticmaalayaasha diiwaangashan iyo ku dhawaad ​​400,000 oo sawir online ah.
Canva waa aalad naqshadeynta garaafka onlaynka ah oo waliba bixisa sawirro kayd ah oo lacag la’aan ah. Mid ka mid ah faa'iidooyinka isticmaalka Canva waa inaad si dhakhso leh ugu rogi kartaa sawir sawir garaaf ah si aad ugu isticmaasho warbaahinta bulshada ama balooggaaga.
Waxaa la bilaabay 2013, Canva wuxuu awood u siinayaa qof walba oo adduunka ah inuu wax walba naqshadeeyo oo meel walba ku daabaco.
10. Sawir -gacmeedka
Sawirka sawirrada waxaa ku jira sawirro qurux badan oo lacag la’aan ah oo ay soo gudbiyeen Dave Meier iyo sawir qaadayaal kale duwan. Dhammaan sawirada waxaa lagu sii daayay Creative Commons CC0.
Goobtan sawirka saamiyada ee bilaashka ah ayaa malaayiin qof siineysay sawirro la yaab leh tan iyo 2017.
picjumbo waa goob sawir kayd ah oo lacag la’aan ah oo la abuuray 2013 oo uu sameeyay naqshadeeye & sawir qaade Viktor Hanacek.
Picjumbo waa ururinta sawirro gebi ahaanba bilaash ah oo loogu talagalay shaqooyinkaaga ganacsi & shaqsiyeed. Sawirro cusub ayaa maalin walba lagu daraa noocyo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin abstract, fashion, dabeecadda, farsamada, iyo waxyaabo kaloo badan.
qarxaan waa madal sawir kayd ah oo lacag la’aan ah oo ay awood u leedahay Shopify. Maktabadooda sawirrada waxaa ku jira kumanaan sawirro qaraar sare ah, oo aan boqornimo lahayn oo ay toogteen beesheena caalamiga ah ee sawir qaadayaasha.
13. Ururinta Jopwell
The Ururinta Jopwell waxaa ku jira dhowr album oo leh boqolaal sawir oo ay ka dhex muuqdaan dad ka tirsan bulshada Jopwell. Sawirada waa bilaash in la soo dejiyo oo la isticmaalo ilaa iyo inta sumcadda sawirku u socoto Jopwell.
Sida Canva, Crello waa aalad naqshadeynta garaafka oo lacag la’aan ah oo aad ku abuuri karto naqshado oo aad ku heli karto sawirro kayd ah oo lacag la’aan ah si aad u isticmaasho.
iStock by Getty Images ayaa ka soo koray bilawga 6-qof si ay u noqoto ciyaaryahan caalami ah oo ku jira warshadaha warbaahinta saamiyada oo leh boqolaal shaqaale ah iyo in ka badan 160,000 wax ku biiriyayaal caalami ah. Summada ahaan, iStock waxay u taagan tahay hal-abuurnimada iyo deeqsinimada iyadoo samaynaysa sawirro kayd ah oo bilaash ah oo la heli karo si guud ahaan loo isticmaalo.
iStock waxay sii deyneysaa dufcad cusub oo ah faylasha kaydka bilaashka ah toddobaad kasta markii aad iska diiwaangeliso xubinnimada lacag la'aanta ah.
16. Hantida Hore ee Cusub
Suuqa cusub ee Old waa ururinta sawirrada guridda laga soo qaatay kaydka dadweynaha, oo ka madax bannaan xayiraadaha xuquuqda daabacaadda ee la yaqaan.
17. Raadinta Sawirka Sare ee Google
Raadinta Sawirka Sare ee Google waa hab lagu helo sawirro si bilaash ah loo isticmaalo iyada oo loo marayo aaladaha raadinta ee Google.
Kaliya ku qor weydiintaada raadinta - oo fiiri natiijooyinka sawirka bilaashka ah oo soo baxaya. Waa kan hage deg deg ah.
On freepik.com, waxaad ka heli kartaa waxyaabaha ugu tayada sarreeya: sawirrada, sawirrada, astaamaha, jeesjeesyada, iyo tusaalooyinka bandhigga dhammaantood waa bilaash.
19. Jamhuuriyadda ISO
Jamhuuriyadda ISO wuxuu bixiyaa sawirro kayd ah oo tayo sare leh iyo fiidyow hoostooda shatiga CC0 ee deeqsi ah. Ma jiraan wax xaddidaad ah. Waxaad si xor ah u soo dejisan kartaa, u adeegsan kartaa mashaariicda shaqsiyeed iyo kuwa ganacsi labadaba, wax ka beddeli kartaa ama wadaagi kartaa, oo sidaas samayn kartaa adiga oo aan haysan oggolaansho ama ku -xirnaanta abuuraha shaqada.
Hadafkoodu waa inay soo bandhigaan ururinta sawirada saamiyada iyo fiidyowyada oo aad si aad ah u adeegsan karto si shaqsi ahaan iyo ganacsi ahaanba ah. Wax badan ka baro iyaga ruqsada.
LifeofPix wuxuu ku taxay sawirro qaraar sare oo lacag la'aan ah iyo la-hawlgalayaasha Adobe Stock sawirro kayd ah oo dheeraad ah (la bixiyay).
Haddii aad u dhiseyso degel cusub oo meheraddaada ah ama aad u abuureyso baloog ku saabsan noloshaada shaqsiyeed, waxaad u baahan doontaa sawirro. Si lagaa dhaafo kharashka ku baxa si aad u hesho sawirrada saamiyada, maqaalkani wuxuu si taxaddar leh u tilmaamayaa bogagga shabakadda sawirrada kaydka ugu fiican ee loo adeegsado shaqsi ahaan iyo ganacsi ahaanba.
blog.snappa.com - 21 Meelo Amaan ah leh Sawirro Leh Ah Oo Lagu Saarayo
buffer.com - 24+ goobood si aad u hesho Sawirro Bilaash ah oo aad Dhab ahaan u isticmaali lahayd Suuqgeyntaada
blog.hubspot.com - 24 ka mid ah Goobaha Sawirka Sawirka Lacag -La'aanta ee ugu Fiican ee La Adeegsado
Meelaha ugu jaban ee laga helo Daabacadaha Canvas | 2022
17 Habab Hal -abuur leh oo Lacag Loogu Sameyn Karo 2022
Waqtiga ugu Wanaagsan ee Lagu Iibsado Qalabka 2022 Goobta
Sida Loo Sameeyo Lacag Online Ah Iyadoo Aan Waxba Bixin 2022
10 -ka Ciyaaryahan Fiidiyowga Ugu Fiican Sanadka 2022
Bangkok waxaa lagu aqoonsaday xeebaha quruxda badan, dhaqanka muhiimka ah, hiddaha, cunnooyinka kala duwan, meelaha lagu caweeyo ee waalan, iwm. Dhanka kale…
10 Barnaamijyada Goobta Baabuurka ee ugu Fiican 2021 -ka
Helitaanka meel baabuurta la dhigto way adag tahay magaalooyinka dadku ku badan yahay. Meelaha kaliya ee bilaashka ah ee laga yaabo inaad hesho waxay noqon kartaa "maya…
Adeegyada Mushaharka Ganacsi ee ugu Fiican - Lacag -bixinta Shaqaalaha ayaa la fududeeyay
Mushaar-bixintu waxa la odhan karaa waa kharashka ugu badan ee ganacsiga, maarayntana waxay noqon kartaa hawl adag. The…